ရုံးသုံးမောက်စ် - MEETION
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ရုံးသုံးမောက်စ်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေသို့မဟုတ်နှင်းခူသို့မဟုတ် psoriasis ကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုရရှိထားသူများအတွက်ဤထုတ်ကုန်သည်ပြီးပြည့်စုံသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းဝတ်ဆင်သည့်အခါဤလူများကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။.
လက်ဝဲ Gaming Keyboard KB015
item no ။ : Mt-kb015အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 697034473222616ဖော်ပြချက် - လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများအတွက် Universal-universal ။
Meetion C500 Gaming Peripherals အရံပစ္စည်းများအစုအဝေးနှင့်ကီးဘုတ် combo headset နှင့်အတူ
Meetion C500 Gaming Keyboard Mouse နှင့် Obese Combo 41) အသက်ရှူခြင်းနှင့်အတူရောင်စုံ backlit ။ 2) သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး soft keys များ,3) အမှားအယွင်းများထွက်ပြေးရန်အချိန်, လေဖြတ်ခြင်း - 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ပါပြီ။ 4) 19 keys anti-chosting5. Windows XP / Vista / 7/8 / 10, Mac OS တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ 6. Multimedia, Internet စသည်တို့အတွက် FN Shortcut ခလုတ်များ 12) ရွှေပြား USB USB Interfacs "
တွေ့ဆုံပွဲပရော်ဖက်ရှင်နယ် GAMUS MOUSE ကို G3325
ပစ္စည်းအမှတ်။ : MT-G3325အမှတ်တံဆိပ်: MEETIONအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်EAN: 6970344731721ဖော်ပြချက် - Professional Gaming Mouse PMW3325
Meetion ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝါယာကြိုးစက်မှုဂိမ်းကစား Mouse M990
◆လူမီနီယမ်အလွိုင်းအခြေစိုက်စခန်း၊ မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်သည်။resolution အရည်အသွေးမြင့်မားသောဂိမ်းကစားနိုင်သည့်တုန့်ပြန်မှု။mic မိုက်ကရိုဆပ်၏အကြိမ်ပေါင်းငါးသန်းကျော်သက်တမ်း။polymer ပုံမှန်ပေါ်လီမာများထက် ၁၀ ဆပိုသောပိုလီမာ wear-tahan ခံခြေဘောင်များ။◆သဘာဝသည်စွန်ပလွံပုံစံနှင့်ဒီဇိုင်းကိုက်ညီမှုရှိသည်။◆အမြန်နှုန်း / အပြည့်အဝမြန်သော USB interface၊ 480MBPS နှုန်း၏တစ်စက္ကန့်စီပို့လွှတ်မှုနှုန်း။◆ဂိမ်းများ၊ မာလ်တီမီဒီယာထိန်းချုပ်မှုမုဒ်ပြောင်းခြင်း။◆လေး DPI ဂီယာ။
2.4G slim colleghargearable အသံတိတ်ကြိုးမဲ့ mouse r600
item no ။ : Mt-r600အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: Gloss Silver, နှင်းဆီရွှေ, အာကာသမီးခိုးရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703447311776ဖော်ပြချက် - အားသွင်းနိုင်သောကြိုးမဲ့မောက်စ်
GA9520 အတွက် RGB သံလိုက်လက်ကောက်ဝတ် Keyboard K9520
item no ။ : MT-K9520အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာအတွက်Ean: 6970344473213131ဖော်ပြချက် - အမြန်အသံအတိုးအကျယ်ညှိနှိုင်းမှုခလုတ်, မြင့်မားသော - ပြင်းထန်မှုသံလိုက်
ကြီးမားသောတိုးချဲ့ Gamer Desk ဂိမ်း Mouse Mat P100 ဂိမ်းကစားခြင်း
item အမှတ် :Mt-p100အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာအတွက်Ean: 6970344731394ဖော်ပြချက်: ကြီးမားသောတိုးချဲ့ဂိမ်း mouse pad